पुरुषको वीर्यबारे रोचक ७ जानकारी, जुन तपाईले थाहाँ पाउदा राम्रो — Imandarmedia.com
काठमाडौ। वीर्य एक जैविक तरल पदार्थ हो। जो महिलाको योनिमा छाडियो भने र डिम्बसंग निषेचित भए गर्भ रहन्छ। वीर्य बारे धेरैलाई थाहा नभएका केही कुरा चर्चा गरौं।
एक पुरुषको आधा वीर्यमात्र सिधा लाइनमा तैरिने गर्दछ । तैरनुको अर्थ सक्रियतासँग सम्बन्धित छ। केही वीर्य सर्कलको चारैतिर तैरिने गर्दछ वा वीर्यको प्रवाहसँग अलग हुन्छ।
औसत वीर्य नमूना ३० लाख हुन्छ, जो एक चम्चाको दुई तिहाई हुन्छ। सामान्य रुपमा एक पुरुषले एक सेकेन्डमा १५ सय ‘स्पर्म सेल’ पैदा गर्ने गर्दछ।
यदि एकपटकको स्खलनमा जीवनको सम्पूर्ण वीर्य निकालियो भने यो मिलाउँदा ९ किलोमिटर लामो हुन्छ। गर्मीका कारण वीर्यको सक्रियता कम हुन्छ। शरीरका अन्य भागको तुलनामा वीर्य सात डिग्री फरेनहाइट कुलिङमा रहन्छ।
स्खलनमा ९० प्रतिशत वीर्य विकृत हुन्छन् । लाखौंमा एक वीर्य महिलाको अण्डासँग मिलेर प्रजनन गर्ने गर्दछ। अचम्म ! पुरुषको पेटमा ४ महिनाको गर्भ, सन्तान जन्माउने तयारी : के तपाईले कहिल्यै कोही पुरूष गर्भवती भएको सुन्नु भएको छ ?
जवाफ पक्कै पनि छैन भन्ने नै होला। तर बेलाएका एक पुरुष भने गर्भवती छन्। बेलायतको बोस्टन निवासी बोस्टनका मिके चनेल नामक १८ वर्षीय एक युवक गर्भवती भएका छन्। उनको गर्भमा ४ महीनाको शिशु हुर्किरहेको छ।
उनको गर्भावस्थाको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेको छ। चिकित्सकका अनुसार मिकेको शरीरमा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेका कारण उनी गर्भवती भएका हुन्।
मिकेकी आमाका अनुसार मिके गर्भमा हुदाँ उनलाई चिकित्सकले छोरी हुने बताएका थिए। तर जब मिकेको जन्म भयो उनी छोराका रुपमा जन्मिए। तर विस्तारै मिकेमा महिलाको गुण देखिदै गयो।
मिके चनेल गर्भवती भएकोमा अत्यन्त खुसी छन्। उनको अभिभावक बन्ने चाहना पुरा भएको छ। अब उनी केवल गर्भमा रहेको शिशुको जन्मको प्रतिक्षामा छन्।
जहा पहिला यौ’नसम्पर्क गरेर मात्र विवाहका लागि केटी छानिन्छ:
कतिपय कुराहरू सुन्दै अनौठो लाग्छ । आ-आफ्नो ठाउको परम्परा अनुसार समाजको नियममा बाँधिनु पर्ने हन्छ । यस्तै छ कम्बोडियाको सुन्दा आश्चर्य लाग्ने खालको परम्परा
जहाँ छोरीलाई आफ्नो जिवन साथी रोज्न एक भन्दा बढी पुरुषसंगका यौ न सम्बन्ध राख्न अभिभावकले नै उक्साउँछन् । छोरीहरुको सजिलोका लागि बुवाआमाले नै घरभन्दा केही टाढा प्रेम झुपडी बनाइदिन्छन् ।
यसमध्येको एउटा परम्परा कम्बोडियामा छ, जहाँ युवतीहरुलाई धेरैजना पुरुषसँग यौ न सम्बन्ध कायम गरी आफ्नो लागि उपयुक्त लोग्ने छान्ने स्वतन्त्रता छ ।
कम्बोडियाको क्रिउन आदिवासीहरुमा विवाहको एउटा अनौठो परम्परा रहेको छ । आदिवासी समुदायका चेलीहरु विवाह पूर्वनै आफुले चाहेका एकभन्दा धेरै युवकहरुसँग यौ न सम्पर्क गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।
जसले एकैरात ६ जना श्रीमतीसँग सहवास गरे, उनि भोलिपल्ट भए आस्पताल भर्ना
अफ्रिकामा एक अनौठो घटना घटेको छ। अफ्रिका महाद्वीपको नाइजेरियामा यस्तो घटना सुनियोत्यो अनौठो घटना हो । धेरैजसो हामिले पतीले पत्नीमाथि अत्याचार गर्ने गरेको सुन्दै आइरहेका छौ ।
नाइजेरियामा भएको यो घटनामा पत्नि पिडित नभएर पति पिडित भएका छन् ।ती पीडित पुरुष नाइजेरियाका युरोको ओनोजा हुन्। जो अब यो संसारमा छैनन्। नाइजेरियाको बिनेयू युरोको एक करोडपति व्यापारी थिए।
उनले ६ श्रीमती विवाह गरेपछि जीवनमा सबै कुरा ठिकठाक चलिरहेको थियो। तर उनले ६ वटा विवाह गरेपछिसबै श्रीमतीलाई समान समय दिन नसकेपछि श्रीमतीहरु रुष्ट थिए ।
युरोको यस्तो व्यवहार बाँकी पाँच जना श्रीमतीलाई मन परेको थिएन। त्यसैले पाँच जना श्रीमती मिलेर युरोलाई त्यतिबेलासम्म बला त्कार गरे जतिबेला सम्म उनको निधन भएन।
युरोको बला त्कार गरेर ह त्या गर्ने पाँच श्रीमतीका अनुसार छैटौं विवाहपछि उनले बाँकी पाँच जना श्रीमतीलाई समय दिएका थिएनन् र उनीहरुको इच्छा र चाहनालाई पूरा गर्न सकेका थिएनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमका अनुसार युरो आफ्नी छैटौं श्रीमतीसँग यौ न सम्बन्ध बनाइ रहेका थिए। त्यति नै बेला अन्य पाँच जना श्रीमती उनको कोठामा पुगे। पाँच जना श्रीमतीले पनि आफूलाई पनि पालैपाले यौ न सम्पर्क गर्न निर्देशन दिए जसका कारण पाँचै जना श्रीमतीसँग यौ न सम्पर्क गर्नु उनको बाध्यता भयो। किन भने उनीहरुसँग चक्कु, छुरा र अन्य हतियार पनि थियो । श्रीमतीको दबावमा उनले पालैपाले यौ न सम्पर्क गर्न थाले।
बिवाहमा धेरै रोहेर बेहुलीको मृत्यु: नेपाल लगायत बिश्वका केही देशमा विवाहको दिनमा बेहुली रुने परम्परा पहिले देखि नै चलिआएको छ । हिन्दू परम्परा अनुसार विषेशगरी दुलही वा छोरीलाई विदाई गर्ने क्रममा रुवाबासी हुने गर्छ । छोरीलाई पराइघर पठाउने बेलामा माइती पक्ष धुरुधुरु रुने चलन अझै पनि रहेको छ ।
तर हाम्रो छिमेकि देश भारतको ओडिसा राज्यमा भने रुने मात्र होइन विवाहको दिनमा बेहुलीको रुदाँ रुदै मृ’त्यु समेत भएको छ । भारतीय समाचार अनुसार यो घटना ओडिसाको सोनपुरको हो ।
मुरली साहुको छोरीको बलांगीर जिल्लाको टेटलगांव निवासी बिसीकेसनको साथमा विवाह भइरहेको थियो । विवाहको सम्पुर्ण कार्यक्रम हुँदै गएर विदाईको समय भएको थियो ।
दुलही लगातार रोहिरहेकी थिइन् । धेरै रुदाँ रुदाँ बेहुली बे’होस भएर भुईमा ल’डिन् । आफन्त कोहीले पानी छ’म्किन थाले त कसैले मालिस गर्न थाले । तर उनी ब्युझिनन् । त्यति गर्दा पनि नभएर उनलाई स्वास्थ्य चौकी लगियो तैपनि उनलाई डाक्टरले बचाउन सकेनन् ।
डाक्टरले युवतीको मृत्यु कारण ह’र्ट अ’ट्या’क’ भएको बताएका छन् । प्रहरीले पोस्र्टमार्टम गरेपछि युवतीको श’व परिवारलाई बुझाएको छ । बेहुलीको नि’धन पछि वरपरका गाउँ सबै शोकमा डुबेका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा
एयर होस्टेसले एकपटक फ्लाइटमा ब्रिटेनका प्रसिद्ध फुटबलर शारिरीक सम्बन्ध राख्दै गरेको अवस्थामा फेला परेको खुलासा गरेकी छिन्। एयर होस्टेजले फुटबलरसँग आफ्नो पहिलो भेटकाबारे पनि जानकारी दिएकी छिन्।
उनले एकपटक फुटबलरको क्याबिनमा जाँदा गर्दै आफूलाई रोकिएको बताएकी छिन्। एयर होस्टेसको नाम लोरी हो। लोरीले केही दशक निजि जेटमा एयर होस्टेसको काम गरेकी छिन्।
उनले ‘द डेली बेस्ट’ लाई ब्रिटेनका प्रसिद्ध फुटबलरले फ्लाइटमै शारिरीक सम्बन्ध राखेको कुरा आफूलाई थाहा भएको बताएकी छिन्। फुटबलरसँगको पहिलो भेटबारे जानकारी दिँदै लोरीले भनिन्, ‘उनले मलाई आफ्नो पाइन्ट फेर्नेबारेमा सोधेका थिए।’ दोस्रो भेटमा फुटबलर आफ्नो श्रीमतीसँग भएको र न्यूयोर्कको नाइट आउटपछि उनीहरु लण्डन जाँदै गरेको उनले बताएकी छिन्। ‘
द सन’को रिपोर्टअनुसार जब विमान हावामा थियो लोरी फुटबलरको क्याबिनमा प्रवेश गर्दै थिइन्। तर उनलाई त्यसैबेला उनकी एक सहकर्मीले रोकेकी थिइन्। ती सहकर्मीले उनलाई ‘भित्र से’क्स गरिरहेका छन्’ भनेकी थिइन्। लोरी भन्छिन्, ‘व्यक्तिगत रुपमा यो गलत हो भन्ने मलाई लाग्दैन।
किनकि उनीहरु लाखौं डलर खर्च गर्छन्। यदि म पनि यति धेरै खर्च गरिरहेको हुन्थेँ भने आफ्नो श्रीमानसँग रमाइलो गर्थेँ।’ तर लोरीले फुटबलरको नाम बताउन मानिनन्। उनले यसलाई नियम वि’परीत भनेकी छिन्।
कसैले पनि पैसा दिएर निजि विमानमा रमाइलो गर्ने सक्ने बताइएको छ। दुर्ई अमेरिकी एयरलाइन्स फ्लामिङ्गो, एयर र लभ क्लाउडले कपलका लागि यसै प्रकारको प्याकेज नै दिने गर्छन्। यसको बुकिङ लाखौं डलरमा गर्नुपर्छ।
रमाइलो गर्न क्लव जाँदा आफ्नी गर्लफ्रेण्ड नाचिरहेको देखेपछि…..